Umatshini weMask yobuso, uMenzi woMaski woMatshini-Frand
malunga thina ngathi
IXIAMEN FRAND INTELLIGENT IZIXHOBO CO., LTD ibekwe Kumgangatho Wesithathu, No.130 Yokwakha Jiapin Indutrial Park, Guan Kou Zhong Road, Jimei District, Xiamen Fujian, China. Isebenze kolu shishino kangangeminyaka eli-15. Lishishini lezenzululwazi kunye netekhnoloji yale mihla elikhethekileyo kuphando olwenziwe ngokwezifiso kunye nophuhliso lweeseti ezigqibeleleyo ezikrelekrele zezixhobo, indibaniselwano yomatshini esizisebenzelayo kunye nokusetyenziswa kweenkqubo zerobhothi zeshishini. Okwangoku, ineziseko zemveliso ezine ze-R & D kunye neepatent ezingama-60.
Inkampani yethu ikakhulu ibandakanya iinkalo ezintlanu eziphambili zamandla amatsha, iinxalenye zeemoto, ukuchaneka kwe-elektroniki, izixhobo zekhompyuter kunye nokutshixa, kunye nenkqubo yefektri ekrelekrele. Izixhobo zithunyelwa eJamani, eUnited States, eJapan, eThailand, eIndiya, njl njl. IZIXHOBO ZOKUFUNDA NGOKUGQIBELELE zijolise kuphando olwenziwe ngokwezifiso kunye nophuhliso lwezixhobo ezikrelekrele ezikumgangatho ophezulu, umatshini wokudibanisa ohlanganisiweyo kunye nokusetyenziswa kweenkqubo zerobhothi. Ineziseko ezine zophando kunye nophuhliso lwemveliso kunye neepatent ezingama-60.
Ngokupheleleyo Auto Indlebe Loop Welding Machine
Ngokupheleleyo Umatshini weMaski yoNyango oZenzekelayo
Ngokupheleleyo Auto Medical Vuvu Machine Ngaphandle Welding Machine
Umbhobho uqinisa Machine FRAND-H-14
Ukwahlulahlula kunye neempawu zomatshini wemaski
Umatshini womzimba opheleleyo ozenzekelayo, kubandakanya ukondla, uhlobo lweplastikhi yohlobo lwealuminium ...
Iimpawu kunye nemigangatho yentlanzi eyenziwe ngomatshini wemaski
Imaski yeentlanzi kufuneka ihlangane ne-EU en149: 2001 P3 esemgangathweni. Kusetyenziswa ikakhulu ukukhusela kakhulu ...
Khetha umatshini wemaski kuya kufuneka wazi la manqaku alandelayo
Kule mihla, abantu abaninzi nangakumbi babona intengiso yeemaski zokhuselo, kwaye babone imeko ye-futu ...
Ngokupheleleyo auto umatshini imaski zonyango ngaphandle umatshini iwelding
Ngokupheleleyo auto umatshini imaski zonyango ngaphandle umatshini welding ...
Ngokupheleleyo auto oluzenzekelayo loop umatshini iwelding Vuvu ngaphandle ...
Ngokupheleleyo auto umatshini imaski zonyango ...
Umatshini womzimba opheleleyo wokuzenzekelayo, kubandakanya ukondla, uhlobo lweplastikhi yohlobo lwe-aluminium yokufaka / ukuhluba, ukukhetha indawo, ifusion ye-ultrasonic, ukusika njalo njalo, imveliso iphezulu kakhulu, inokuvelisa iziqwenga eziyi-1-200 ngomzuzu. Esona siphambili soguquguquko kwisantya samandla ombane ca ...
Imaski yeentlanzi kufuneka ihlangane ne-EU en149: 2001 P3 esemgangathweni. Isetyenziswa ikakhulu ukuthintela uthuli oluhle kakhulu lweshishini kunye nomsi wentsimbi ngexesha lokusebenza kwe-welding. Ngaphezulu kwe-99% yazo inokusebenza ngokuhluza, okulungele ngakumbi imeko emanzi neshushu okanye ukunxiba ukhuseleko ixesha elide; ndi ...
Kule mihla, abantu abaninzi nangakumbi babona intengiso yeemaski zokuzikhusela, kunye nokubona imeko yophuhliso lwexesha elizayo. Intengiso inkulu kakhulu. Ngakumbi nangakumbi abantu bakhetha ukuthenga izixhobo zoomatshini ukuze babe ngabenzi bemaski. Ngaba unawo la mathuba alandelayo onokuthi uwaqwalasele xa ukhetha iimaski? ...
umatshini wokwenza imaski, umatshini wobuso bomaski, umatshini wokwenza imaski engalukanga, ithumbu nokubotshwa umatshini, non elukiweyo ubuso imaski ukwenza umatshini, oomatshini ubuso ukwenza imaski,